HomeWararka CiyaarahaManchester City oo qaab Cusub ku wajaheysa Harry Kane, Tottenham oo aanan celin karin Markaan
July 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay sameyso fursad sugitaan ah madaama ay doonayaan Harry Kane oo ka socda Tottenham Hotspur .
Weeraryahankan muddada dheer shaqeynayay ayaa la sheegay inuu ku wargeliyay gudoomiyaha Spurs Daniel Levy inuu doonayo inuu qabto tartan cusub ka dib markii uu ku guuldareystay inuu ku guuleysto koobab Waqooyiga London.
Inkasta oo City la ogyahay inay xiiso xoogan u qabto ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England, Levy ayaa la sheegay inuu ka soo horjeedo inuu ku iibiyo wax ka yar £ 160m.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay The Sun , kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa diyaar u ah inay badasho sheekada ilaa maalmaha ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga xagaaga.
Warbixinta ayaa soo jeedinaysa in City ay waqtigooda u huri doonto rajada ah in Levy ay hoos u dhigi doonto qiimihiisa toddobaadyada soo socda.
Si kastaba ha noqotee, Spurs waxay rajeyneysaa in dib u dhac kasta oo ku yimaada dalab rasmi ah oo ka yimaada Citizens inay abuuri doonto xiisaha meelo kale, taasoo ku qasbeysa City lasoo wareegida xidigan haddii ay doonayaan inay ku guuleystaan ​​tartanka loogu jiro saxiixa 27 jirkaan.